Oovimba abagcina imali
12 May 2021 | Ukuhlaziywa: 12 May 2021
I-MoneyGram ngoku ijongene ne-Class-Action Suit ngaphandle kokuSika amaqhina nge-Ripple
3 Matshi 2021 | Ukuhlaziywa: 3 Matshi 2021
I-MoneyGram iye yatyhwatyhwa ngezenzo zeklasi ezityholwa ngokulahlekisa abatyali mali I-Ripple (XRP) ukuthengisa. Inkampani iRosen Law Firm ibhengeze ukuba iyagcwalisa ityala lokuthatha amanyathelo ngokuchasene nenkampani yesisombululo sentlawulo egameni labatyali mali abathenga ukhuseleko lweMoneyGram kwi2019.
Inkampani yamagqwetha iqaphele ukuba abatyali zimali abathenga izabelo zeMoneyGram phakathi kukaJuni 17, 2019, kunye noFebruwari 22, 2021, banelungelo lokufumana imbuyekezo kwinkampani, becinga ukuba iMoneyGram ihlangene neRipple Labs. U-Ripple okwangoku ulwa nesuti kunye ne-SEC ngesityholo sokubonelela ngokhuseleko olungabhaliswanga ngokuthengisa iXRP.
Isikhalazo esiQinisekileyo seRosen Law sityhola ngelithi: "Abatyholwa benza ingxelo engeyonyani kunye / okanye elahlekisayo kwaye / okanye basilele ukubhengeza ukuba i-XRP, imali eyimali eyayisetyenziswa nguMoneyGram njengenxalenye yobambiswano lweRipple, yayijongwa njengongabhaliswanga kwaye ke ukhuseleko olungekho mthethweni yi-SEC."
Okwangoku, kwiiveki nje ezimbalwa ezidlulileyo, iMoneyGram ibhengeze ukuba iyarhoxisa ubudlelwane bayo neRipple kwaye iyekise okomzuzwana ukusetyenziswa kweXRP kwinethiwekhi yayo. Intlawulo ye-behemoth ifumene intlawulo kwi-Ripple yokunyusa i-XRP yeenkonzo zokuthumela. I-XRP yasetyenziselwa ukuguqula iintlobo ngeentlobo zemali zamanye amazwe ngendlela ekhuselekileyo nangexabiso eliphantsi nge-blockchain yayo.
Nangona I-MoneyGram yakhawuleza ukusika ubudlelwane noRipple emva kwesigwebo se-SEC, ayibathintelanga abatyali zimali ukuba bahlangane emva kwetyala lesenzo, bebanga ukuba inkampani iyabalahlekisa.
Amanqanaba aphambili eXRP aBonwayo-Matshi 3
I-XRP ibirhweba ngaphakathi kuluhlu oluphakathi kwe- $ 0.4500 kunye ne-0.4000 yeedola kwiveki ephelileyo, njengoko intengiso ye-cryptocurrency ilawulwa ziibhere. Oko kwathethi, kubonakala ngathi iinkunzi zeenkomo ziqala ukuthatha ulawulo, kwakhona, nge-XRP ecela umngeni kwi-0.4500 yokuxhathisa.
Ikhefu elingaphezulu kwe- $ 0.4500 linokuthatha i-cryptocurrency iye kwi- $ 0.5000 nangaphezulu kwiiyure ezizayo. Nangona kunjalo, i-XRP okwangoku iswele nayiphi na ivolumu yokurhweba yokungazinzi, ngaloo ndlela isenza intshukumo ebukhali inyukele phezulu inengxaki. Oku kuthetha ukuba sinokubona i-cryptocurrency yesixhenxe ngobukhulu idityaniswa kwindawo eyi- $ 0.4500 kangangexesha elincinci.
Nangona kunjalo, ukuwa ngaphantsi kwe- $ 0.3838 kubonakala kungenakwenzeka ngalo mzuzu.
Okwangoku, amanqanaba ethu aphikisayo akwi- $ 0.5400, $ 0.6000, kunye ne- $ 0.6374. Ngelixa amanqanaba ethu enkxaso aphambili ayi- $ 0.4524, $ 0.3838, kunye ne- $ 0.3500.
Ukunyuswa kwemali yentengiso yeXRP: $ 20.3 billion
XRP ukubusa: 1.3%
tags Cryptocurrency, IMONEGRAM, Ripples, XRP
23 Februwari 2021 | Ukuhlaziywa: 23 Februwari 2021